I-HELSTROM YEMARVEL YOKUDALA IFUZZ MALUNGA NE-BRO-SIS DUO, KUNGEKUDALA IZA KUKHUTSHWA NGAPHANDLE - IINKQUBO ZETV
I-Helstrom yeMarvel yokuDala iFuzz malunga neBro-Sis Duo, kungekudala izokwabiwa
Unjingalwazi ohloniphekileyo kunye nomzingeli weedemon odibeneyo bahlangana kunye nodade wabo owahlukanisiweyo ukuze bathathe into ekhohlakeleyo kwiidemon
Unjingalwazi ohloniphekileyo kunye nomzingeli weedemon odibeneyo bahlangana kunye nodade wabo owahlukanisiweyo ukuba bathathe into ekhohlakeleyo yeedemon kwi-trailer. Uncedo , uthotho olothusayo oluzayo olusekwe kubalinganiswa beMarvel Comics. Iingqungquthela ze-10-episode series kwiHulu kwinyanga elandelayo.
I-Helstrom: Yintoni Zonke iiFani eziyaziyo malunga neMidlalo?
IHelstrom ine ibali elinzima emva . Njengoko kubhengeziwe kwi-2019, uHulu ubhengeze inkqubela phambili yamanqaku amatsha eMarvel-centric, Ghost Rider (kunye noGabriel Luna ebuyela ukudlala indima yakhe kwiiAgents ze-SHIELD) kunye ne-Helstrom. Olu luhlu lwalenzelwe ukubetha i-standalone Adventure kwi-Franchise yokoyika enokubangela into eyoyikisayo kwiresiphi yeMarvel.
UMgibeli weZiporho kungekudala wehla ecaleni kwendlela, kwaye ngoDisemba 2019, iMarvel Television yayingasebenzi. Oko kwenza uHelstrom asinde yedwa kwi-franchise esekwe kwi-horror. Ukudubula kugqitywe ngo-Matshi, kanye ngaphambi kokuba ubhubhane we-COVID-19 ukhuthaze uninzi lweemveliso zaseHollywood ukuba ziyeke ukunqumama. Isivumelwano somboniso uPaul Zbyszewski sigqityiwe ngo-Epreli, kodwa walinda ukuveliswa kwakhona.
IHelstrom: Yintoni ekufuneka uyazi malunga noMzalwana-Dade-Duo?
La manqaku manqaku abalinganiswa ababini abavela kwiiMarvel Comics. UDaimon Helstrom (unyana kaSathana) othe ekugqibeleni wakhula njengomntu ophindaphindayo kwi-The Defenders. Olunye ukhokelo ngudade wabo, uSathana. Ubandakanya ubugqwetha kunye nookhokho bakhe ngelixa uDaimon ethatha isigqibo sokukhusela ubuntu.
Ngokucinga okusemthethweni: Ihlabathi alilungelanga ukuhlangana kosapho lakwaHelstrom. Njengonyana kunye nentombi yombulali omnyama ongenabungozi. UHelstrom ulandela uDaimon (Tom Austen) noAna Helstrom (uSydney Lemmon). Kwaye amandla abo entsonkothileyo, njengoko bezingela abahlwempuzekileyo eluntwini nganye benesimo sabo sengqondo kunye nezakhono.
IHelstrom: Zintoni ekulindelwe ngothotho?
I-teaser yokuqala yaphuma ngoJulayi ngo [imeyile ekhuselweyo] Kwaye inowuthi iyonke yayihambelana noko kulibaziseka rhoqo kweNew Mutants. Yayingomnye umzamo wokuzoba izinto ezoyikisayo kuhlobo lwe-superhero. INew Mutants iqale ukuboniswa kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Nangona iithiyetha ezininzi zihlala zivaliwe, mhlawumbi, bekukho izizathu zokuba imovie ingakwazanga ukukhupha iHulu okanye iDisney +. Ininzi ifumene uphononongo oluxubekileyo kwaye ukuza kuthi ga ngoku ifumene kuphela iidola ezingama-35 yezigidi kuhlahlo-lwabiwo mali oluphakathi kwezigidi ezingama-67 kunye ne-80 yezigidi.
Masinqwenele ukuba uHelstrom ajonge ngcono. Kuba umabonwakude osasazayo ugcina sonke silinganisile kula maxesha angaqhelekanga kunye noloyiko luthelekisa imali ka-Okthobha. Kunye no-Austen no-Lemmon, iinkwenkwezi ze-Helstrom u-Elizabeth Marvel njengo-Victoria (uDaimon kunye nomama ka-Ana). Uhlala kwiziko iminyaka engama-20.
Kwakhona, kukho uRobert Wisdom njengoMkhathaleli (umlo olwa needemon wobugqi). Kukho uJuni Carryl njengoLouise Hastings, (inkokeli yeziko labagula ngengqondo eneVictoria) kunye noAriana Guerra njengoGabriella Rossetti.
IHelstrom: Zithini Iingcebiso ezihanjiswa yiTreyile?
Itreyila iqala ngezwi elivela kuMkhathaleli. Kangangeenkulungwane, besisilwa kwaye sigcina irekhodi lezinto ezingenayo neziphumayo kweli hlabathi. Ezona zisoyikisayo, sifumana indlela yokuthintela. Le yeyona nto imbi kakhulu. Emva koko siphawula ukuba uDaimon uya kunina kwiziko ngaphandle kokuba ubonakala enento yeedemon. Cue Peter Gabriel Umzimba wam Ngaba iCage idlala, njengoko sibona uDaimon exelela uAna emnxebeni. Umxelela ukuba nantoni na engaphakathi kunina, iya isomelela ngakumbi.
Umkhathaleli kunye noLouise Hastings abaqinisekanga ukuba ingaba licebo elihle na eli lokubahlanganisa kwakhona abantakwabo. Kodwa njengokuba uMgcini-mzali esitsho, baxoxa ngedemon enamandla kakhulu ukuba ingahlambulula lonke uluntu. Ke mhlawumbi kufanelekile ingozi.
IHelstrom iya kuqala kwiHulu ngo-Okthobha 16, 2020.
Ixesha le-Alienist 2 yoMhla woMoya, weKamva, eNtsha [CAST] Iindaba ezizayo kunye namathuba kunye noHlaziyo lwamva nje omele Ukwazi
U-Hailey Baldwin ulinganiselwe i-3 ngaphandle kwe-10 kwiVidiyo yeTikTok yokuba ubhekisele kwindawo yokutyela
Ixesha leNdlu elipheleleyo le-5 lakutsha nje [UHLAZIYO] I-Cast entsha, sineeNdaba eziPhazamisayo zaBalandeli bakho
Disney 'Umphefumlo' kaDisney Pstrong [UPDATE], Ithiyori, uCebo, isiQendu, iiTrailer, Sinazo zonke iinkcukacha eziNye kuWe
Ixesha leWestworld 4 kunye nayo yonke into ekufuneka uyazi
I-Dracula yeXesha le-2 yokuKhutshwa, iCast, iPlothi kwaye zeziphi iinkcukacha eziphambili ekufuneka uzazi
UTom Holland ulwabiwo olungafakwanga kuseto lwefoto ebonisa ukuLungiselela ukufota iMuvi eNtsha
U-Godzilla ngokuchasene neKong Role Cast ekhutshiweyo uHlaziyo olutsha Yonke into ekufuneka uyazi malunga nesi sizathu sokuba bayilibazise? Icebo, uHlaziyo lwaMva nje
lungele ukuthanda ixesha lokuhlaziywa kwe2
uthotho lweeodolo ze-anime
Ixesha lomtoli 7 amazon
shrek 3 umhla wokukhutshwa
Isiqendu samandla esitsha 2021
mossad 101 ixesha lesithathu